Afrikanina teraka tao Londres tamin’ny taona 1964 i Mosunmola Abudu na i Mo Abudu. Niverina tao Nizeria, fihaviany, izy sy ny ray aman-dreniny, fony izy 7 taona ary tao an-toerana ihany izy no namita ny fianarany. Teo amin’ny sehatry ny asa indray dia efa nahavita 20 taona, nitazona ny toerana maha- “Directrice des Ressources Humaines” tao amin’ny Vondron’orinasa Exxon Mobil I i Mo Abudu. Ny taona 2006 dia niala tamin’io asany io izy ary nanangana ny orinasany manokana, izay televiziona matanjaka azo jerena manerana an’i Afrika, dia ny EbonyLife TV. Izy no vehivavy afrikanina voalohany nanangana sy nitantana orinasa lehibe, fahita eran’i Afrika.
Ankoatra ny maha filoha mpanorina sy tale jeneralin’ny EbonyLife TV an’i Mo Abudu dia mamokatra sy manentana fandaharana ao amin’ity orinasany ity koa izy. Efa mpanentana fandaharana tany amina’ny haino aman-jery hafa sy lanonana koa izy teo aloha, antony hitazonany ny famokarana fandaharana. Izy rahateo aza moa dia efa voafantin’ny gazety boky Forbes, ho isan’ireo vehivavy afrikanina nahita fahombiazana indrindra.
Mahatoraka ny an’ny amerikanina
Tsy mitsahatry ny miroborobo ny orinasan’i Mo Abudu. Vao tsy ela, voahosotra ho tambajotra lehibe ao amin’ny “Black entertainment et Lifestyle” eto Afrika ny Ebony Life TV. Mamokatra fandaharana voamarina fa tsara kalitao indrindra, maharitra 1 000 ora isan-taona izy ireo. Isan’ireo fahitalavitra be mpijery indrindra amina firenena 49 manerana an’i Afrika koa anefa. Nanomboka ny taona 2014 dia nanokatra ny EbonyLife Films ihany koa i Mo Abudu. Ny EbonyLife Films no namoaka ny “The wedding party”, izay horonan-tsary nampidi-bola be indrindra ho an’ny firenena Nizerianina, mihoatra noho ireo famokarana horonan-tsary avoakan’ireo mpamokatra amerikanina.